Zorrilla ရထား၊ Valladolid ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်နည်းလမ်း။ | ခရီးသွားသတင်း
Zorrilla ရထား၊ Valladolid ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်း
မာရီယာ | | စပိန်မြို့ကြီးများ, ဆွေမျိုး
ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နို ၀ င်ဘာ ၂၄ ရက်အကြား Zorrill ရထားသည်စနေနေ့တိုင်းမက်ဒရစ်နှင့်ဗယ်လာဒီဒိုးလ်အကြားပျံ့နှံ့လိမ့်မည်ခရီးသွားများကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှု၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် gastronomic နေ့ကို Castilian-Leon မြို့တွင်ပြုလုပ်ရန် Renfe Viajeros နှင့် Valladolid မြို့ကောင်စီတို့၏ပဏာမခြေလှမ်း။
မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုဝင်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်အကောင်းဆုံးအချိန်သည်ဆောင်းကာလဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Valladolid သည်ကဗျာဆရာနှင့်ပြဇာတ်ရေးဆရာJosé Zorrilla မွေးဖွားသည့်နှစ် ၂၀၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်မကြာသေးမီကပြီးဆုံးခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ပွဲလမ်းသဘင်များကိုမတက်ရောက်နိုင်ပါက Zorrilla ရထားဖြင့် Valladolid သို့ခရီးထွက်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
1 Zorrilla ရထားပေါ်ဘယ်လိုသွားရမလဲ။
2 Zorrilla ရထားလက်မှတ်ကိုဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ။
3 Zorrilla ရထားလက်မှတ်ကဘယ်လောက်ပါလဲ။
4 အဘယ်အရာကို Valladolid တွင်ကြည့်ရှု?
5 Valladolid မှာဘယ်မှာစားရမလဲ။
Renfe အလယ်ခေတ်မီးရထားသည်Sigüenzaကဲ့သို့ Zorrilla ရထားတွင်ပါ ၀ င်သည့်ပြဇာတ်ရုံခရီးစဉ်ကို ၀ မ်းသာအားရခံစားနိုင်ပြီးကဗျာဆရာအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားသောသရုပ်ဆောင်တစ် ဦး သည်ခရီးသည်များအားဖျော်ဖြေမည်ဖြစ်ပြီး Valladolid သည်သင့်သက်တမ်းကာလအတွင်းသင့်အားကမ်းလှမ်းနိုင်မည့်အကြောင်းများကိုပြောပြပါလိမ့်မည်။ လေ့လာရေးခရီး
အဆိုပါပြဇာတ်ခရီးစဉ်သည်လတစ်လ၏ပထမဆုံးစနေနှင့်နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင်ဖြစ်သည်။ မြို့ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်heritageရာမလှပတဲ့အမွေအနှစ်ကိုမင်းစဉ်းစားနိုင်မှာပါ ၎င်း၏အမျိုးမျိုးသောယဉ်ကျေးမှုနေရာများနှင့်၎င်း၏ gastronomic ကမ်းလှမ်းမှုကိုခံစားအဖြစ်။
ကြိုတင်အရောင်းရဆုံးသောရထားဘူတာများ၊ ကားအရောင်းစက်များသို့မဟုတ် Renfe ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုတယ်လီဖုန်းလိုင်းများတွင် Zorrilla ရထားသို့သွားရန်လက်မှတ်များကိုကြိုတင်ဝယ်ယူရပါမည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူလက်မှတ်၏စျေးနှုန်းမှာ ၄၆.၆၀ ယူရိုဖြစ်ပြီးကလေးက ၃၄.၉၀ ယူရိုဖြစ်သည်။ အသက် ၄ နှစ်အောက်ကလေးငယ်များသည်ထိုင်ခုံမ ၀ င်ဘဲအခမဲ့ခရီးသွားရမည်။
အပြန်ခရီးကိုမွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင်မက်ဒရစ် - ချမ်မာတင်ဘူတာမှထွက်ခွာပြီး Valladolid သို့ညနေ ၁း၅၀ တွင် Avant ရထားဖြင့်သွားသည်။ ပြန်လည်ပတ်သည့်ရထားသည် Valladolid မှနံနက် ၈:၃၅ နာရီတွင်ထွက်ခွာပြီးမက်ဒီဒမ် - ချာမာတင်ကို ၉း၄၀ နာရီတွင်ရောက်ရှိသည်။
အဘယ်အရာကို Valladolid တွင်ကြည့်ရှု?
ဟိုဆေး Zorrilla အိမ်ပြတိုက်
Valladolid သည် the ည့်သည်အားကမ်းလှမ်းရန်များစွာရှိသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သော်လည်းသမိုင်းဆိုင်ရာ - ယဉ်ကျေးမှုရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်အခြေခံလိုအပ်ချက်များမှာဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ ပလာဇာမြို့တော်ဝန်၊ အမျိုးသားပန်းပုပြတိုက်၊ Iglesia de la Antigua, ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့် San Benito ၏ဘုရားကျောင်း, မြင်းစီးသူရဲအကယ်ဒမီ, San Pablo ဘုရားကျောင်း, Patio Herreriano ပြတိုက်, Plaza del Viejo Coso, ဟိုဆေး Zorrilla ၏အိမ် - ပြတိုက်နှင့် Campo Grande ။
Valladolid ခရီးသွားရုံး (Calle Acera de Recoletos s / n) တွင် Zfe ၏ရထားအတွက် Renfe လက်မှတ်ကိုတင်ပြပြီးပါက Valladolid ကဒ်ခရီးသွားကဒ်ကိုအခမဲ့ရရှိပါမည်။ ဒီကဒ်ဖြင့် Valladolid ပြတိုက်၊ ခရီးသွား bus ည့်ဘတ်စ်ကားများကိုအခမဲ့ ၀ င်ရောက်နိုင်ပြီးJosé Zorrilla House-Museum ကိုသွားလိမ့်မည်။
မြို့အ ၀ ှမ်းတွင်စားရန်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောနေရာများစွာရှိသည်။ Plaza Mayor တဝိုက် Valladolid ရှိအကြီးဆုံးအရက်ဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များသည်မြို့လယ်ရှိအကောင်းဆုံး Tapas နှင့် Pinchos များကိုမြည်းစမ်းရန်စုဝေးကြသည်။
သို့ရာတွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည် မှစ၍ Valladolid Gourmet ဘူတာသည်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မြို့၏ရထားဘူတာနှင့်ကပ်လျက်တည်ရှိပြီး Denomination of Origin နှင့်အခြားအချက်အပြုတ်ကြွယ်ဝမှုများနှင့်အတူအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များကိုမြည်းစမ်းနိုင်သည့်ရည်ညွှန်း gastronomic နေရာဖြစ်လာသည်။
Valladolid Gourmet Station သည်ဆန်းသစ်သောစစ်ဆေးချက်စနစ်ကို အသုံးပြု၍ သူတို့၏ဟင်းလျာများကိုရွေးချယ်သောအခါ၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်များနှင့်အသုံးပြုသူ၏လွတ်လပ်မှုတို့ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ Escuela Gourmet သည်ဘက်စုံသုံးစာသင်ခန်းအသစ်လည်းဖြစ်သောစားပွဲများ၊ ထုတ်ကုန်အရသာ၊ gastronomy နှင့်သက်ဆိုင်သောစာအုပ်လက်မှတ်များမှတဆင့်အသုံးပြုသူကို gastronomy ပိုမိုနီးကပ်စေရန်ရည်ရွယ်သည်။
ဒီ gastronomic စျေးကွက်ဟာ Valladolid ရဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ကမ်းလှမ်းချက်ကို tapas နဲ့ pinchos အပြည့်အ ၀ လုပ်ခဲ့တယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာစပိန်တာပါ့စ်၏အဓိကမြို့တော်တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး၊ သင်သည် Castilla y Leónမှတစ်ဆင့်သင်၏လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိဤစားသောက်စားသောက်ဆိုင်အသစ်ကိုလက်လွတ်မခံနိုင်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ဆွေမျိုး » Zorrilla ရထား၊ Valladolid ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်း